गर्भावस्थाका चुनौती कसरी चिर्ने ? – Health Post Nepal
गर्भावस्थाका चुनौती कसरी चिर्ने ?
२०७६ असार २० गते १०:३९
गर्भधारण गरेको मितिदेखि बच्चा डेलिभरी नहोउन्जेलको समयलाई गर्भावस्था भनिन्छ । गर्भावस्थामा धेरै ध्यान दिनुपर्छ । त्यससँगसँगै प्रसवको कुरा पनि यही सन्दर्भसँग जोड्एिर आउँछ । कस्तो किसिमको व्यथा लाग्यो, कसरी डेलिभरी भयो र महिलाको सुत्केरीपछिको अवस्था (बच्चा जन्मिएको समयदेखि ६ हप्तासम्म), यी सम्पूर्ण विषयलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेर्नुपर्छ । गर्भावस्थामा महिलाको हर्मोनमा परिवर्तन हुने गर्छ । सुत्केरी हुनका लागि महिलामा हर्मोन हुने गर्छ, स्टिोजन, प्रोजेस्टन भन्ने हर्मोन हुन्छ । बच्चालाई दूध खुवाउनका लागि प्रोल्याटिन हर्मोन हुने गर्छ । प्राकृतिक रूपमै महिलामा मुख्यतया २ वटा हर्मोन बढी सक्रिय हुन्छन् ।
गर्भधारण गरिसकेपछि प्रोजेस्टन लेबल अलि बढ्ने गर्दछ । प्रोजेस्टनले पाठेघरलाई खुम्चिन रोक्ने गर्छ । पाठेघरलाई खुकुलो पार्ने गर्छ, जसले गर्दा बच्चा पेटमा रहिरहन्छ, गर्भपतन हुन दिँदैन । त्यसैगरी, प्रोल्याटिक हर्मोन पनि सक्रिय हुन्छ, जसले बच्चालाई स्तनपान गर्नेका लागि स्तनको सम्पूर्ण विकास हुनलाई र दूध आउने प्रक्रिया बनाउन र खुवाउनका लागि हर्मोन परिवर्तन हुने गर्छ । यसबाहेक अन्य हर्मोनहरू आफ्नै भूमिका हुन्छन् ।
नेपालमा गर्भावस्थाका चुनौती धेरै छन् । आज पनि हाम्रो मुलुकमा गर्भावस्थामा स्वास्थ्यसंस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीकहाँ सबै महिलाको पहुँच पुग्न सकेको छैन । अझै पनि धेरै महिलाले गर्भावस्थामा जाँच गराउन पाएका छैनन् । सरकारले कमसेकम चारपटक गर्भजाँच गर्न भनेको छ र गर्भजाँच गराउनलाई प्रोत्साहनसमेत गरिरहेको छ । पहिलाको तुलनामा आजभोलि राम्रै भएको देखिन्छ । तैपनि सबै महिलाको गर्भजाँचमा पहुँच पुग्न सकेको छैन ।
गर्भावस्थामा सुरुमा अप्रेसन हुनु वा बच्चा महिना नपुगी खेर जानु, बच्चामा कुनै किसिमको विकृति आउनुलगायत जोखिम हुन्छन् । गर्भकै कारणले सुगर बढेर जाने हुन्छ भने ब्लड अन्य साधारण महिलाको जस्तो हुँदैन, जतिवेला गर्भवतीमा प्रिएक्लाम्सिया, एक्लाम्सियाको अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसले गर्दा पिसाबमा प्रोटिन बढ्ने, बिरामी बेहोस हुने भयो भने उनीहरूलाई आइसियूमा राखेर सघन उपचार गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आउने गर्छ ।
गर्भावस्थामा राम्रो चेकजाँच भएन भने नौ महिनाको अवधिमा स्वस्थ आमा र स्वस्थ बच्चा जन्मिनमा समस्या आउने गर्छ । बच्चामा शारीरिक विकासमा बाधा–अवरोध, बच्चा नबढेको वा चाहिनेभन्दा बढी बढेको हुन्छ । त्यसैगरी, बच्चामा पनि कुनै किसिमको विकृति आएको हुन सक्छ । गर्भजाँच नगराउँदा यस्ता कुराको पहिचान हुँदैन । त्यसैगरी, आमामा पनि गर्भवती अवस्थामा उमेरका कारण पनि धेरै समस्या आउन सक्छन् ।
गर्भवती महिलाको खानपान तथा पोषणले गर्दा स्वास्थ्यमा धेरै असर पर्छ । नेपालमा अझै पनि ६० प्रतिशत गर्भवती महिला रक्तअल्पताबाट पीडित छन् । उनीहरूमा आइरनको मात्रा कम पाइएको छ । फोलिकएसिड डिफिसिएन्सी छ, जसले गर्दा धेरै बच्चामा विकृति पैदा गर्छ । त्यसकारण पनि महिलाको पोषण सन्तुलित हुनुपर्छ । गर्भवतीको खानपानमा प्रोटिनको कमी, आइरनको कमी हुन्छ, जसलाई मिलाएर खान सक्ने क्षमता विकास भएको छैन । जो स्वास्थ्यकर्मीकहाँ आउँछन्, उनीहरूले केही बुझेर जान्छन्, तर नआउनेले केही बुझेका हुँदैनन् ।
गर्भकै कारणले सुगर बढेर जाने हुन्छ भने ब्लड अन्य साधारण महिलाको जस्तो हुँदैन, जतिवेला गर्भवतीमा प्रिएक्लाम्सिया, एक्लाम्सियाको अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसले गर्दा पिसाबमा प्रोटिन बढ्ने, बिरामी बेहोस हुने भयो भने उनीहरूलाई आइसियूमा राखेर सघन उपचार गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आउने गर्छ ।
आइरन, क्याल्सियम, फोलिकएसिड सप्लिमेन्टेसनहरू स्वास्थ्यकर्मीकहाँ गएर लिनु आवश्यक हुन्छ । गर्भावस्थामा परिवारको सहयोग र साथ धेरै चाहिने गर्छ । गर्भावस्थामा मानसिक तथा शारीरिक रूपमा आरामको आवश्यकता पर्छ । अन्य समान्य अवस्थामा जस्तो शारीरिक रूपले घरमा गरिरहेका सबै काम पनि गराउनुहुँदैन । जुनवेला महिलाको शरीरभित्र मान्छे बनाउने प्रक्रिया चलिरहेको हुन्छ, त्यतिवेला शरीरमा धेरै परिवर्तन आउँछन् । त्यो परिवर्तनका लागि परिवारका सदस्यहरूले, खासगरी श्रीमान् तथा सासुले यस्ता कुरा बुझेर आराम गर्न दिनुपर्छ ।
गर्भावस्थाको ९ महिनामा हिँडडुल गर्न र सामान्य काम गर्न सकिन्छ । तर, लुगा घुने, खाना पकाउने, कुचो लगाउनेजस्ता घरसायी काम महिलाको जिम्मेवारीमा हुन्छ, जसबाट गर्भावस्थामा महिलालाई छुटकारा दिनु आवश्यक छ ।
गर्भावस्थामा खानपानमा ध्यान, हल्का व्यायम, आराम, तनाव कम हुनुपर्छ । त्यसैगरी, गर्भावस्थाको जाँचका लागि परिवारका सदस्यले समय–समयमा स्वास्थ्यसंस्थामा लैजानुपर्छ । कमसेकम सरकारी प्रावधानअनुसार ४ पटक जाँच अनिवार्य गर्नुपर्छ । सुविधासम्पन्न ठाउँका महिलाले सुरुको अवस्थामा महिनाको एकचोटि र पछि दुई हप्तामा एकचोटि गर्भजाँच गराउनु राम्रो हुन्छ ।
महिलामा रक्तअल्पता भयो भने प्रसवका वेला थोरै रगत गयो भने पनि बेहोस हुने र मुत्युको मुखमा पुग्ने पनि अवस्था आउन सक्छ । यतिवेला इन्फेक्सनको जोखिम धेरै हुने गर्छ । गर्भावस्थामा फलफूल खाँदा पनि धेरै चनाखो हुनु जरुरी हुन्छ ।
डेलिभरी पनि दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट स्वास्थ्यकेन्द्रमै गराउनु राम्रो हुन्छ । गर्भावस्थामा यात्रा नगर्ने, खुकुलो लुगा लगाउने, साधारण जुत्ता लगाउने, कुनै विशेष परिस्थितिमा विशेषखाले जोखिम तत्व पाइएको छ भने स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहअनुसार गर्नुपर्छ । गर्भावस्थामा सुरुमा अप्रेसन हुनु वा बच्चा महिना नपुगी खेर जानु, बच्चामा कुनै किसिमको विकृति आउनुलगायत जोखिम हुन्छन् । गर्भकै कारणले सुगर बढेर जाने हुन्छ भने ब्लड अन्य साधारण महिलाको जस्तो हुँदैन, जतिवेला गर्भवतीमा प्रिएक्लाम्सिया, एक्लाम्सियाको अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसले गर्दा पिसाबमा प्रोटिन बढ्ने, बिरामी बेहोस हुने भयो भने उनीहरूलाई आइसियूमा राखेर सघन उपचार गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आउने गर्छ ।
महिलामा रक्तअल्पता भयो भने प्रसवका वेला थोरै रगत गयो भने पनि बेहोस हुने र मुत्युको मुखमा पुग्ने पनि अवस्था आउन सक्छ । यतिवेला इन्फेक्सनको जोखिम धेरै हुने गर्छ । गर्भावस्थामा फलफूल खाँदा पनि धेरै चनाखो हुनु जरुरी हुन्छ । किनभने, फलफूल, मासु, दूधमा विभिन्नकिसिमका औषधि मिसाएको पाइन्छ । यी सबै कुराले गर्भावस्था र त्यसको आउटकममा फरक परेको देखिन्छ । त्यस्तो मिलावट गर्नेहरूलाई कुनै कारबाही हुँदैन । तर, त्यसको भारचाहिँ अस्पताल र चिकित्सकले खपिरहेको अवस्था छ ।
(हेल्थपोस्टकर्मी पुष्पराज चौलागाईसितको कुराकानीमा आधारित)
डा. चन्दा कार्की